Nanangana tamin'ny fomba ofisialy ny Expo fizahantany Namibia 2020 ny sefon'ny UNWTO
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Nanangana tamin'ny fomba ofisialy ny Expo fizahantany Namibia 2020 ny sefon'ny UNWTO
Amin'ny 4 Novambra 2020, ny sekretera jeneralin'ny Fikambanan'ny Firenena Mikambana momba ny fizahantany manerantany (UNWTO), Zurab Pololikashvili, dia nanangana tamim-pomba ofisialy ny hetsika fizahan-tany lehibe indrindra any Namibia, ny Namibian Tourism Expo 2020. Ity lohahevitra taona ity dia 10 degre South. Tamin'izany fotoana izany, ny Sekretera jeneraly dia nitehaka an'i Namibia noho izy iray amin'ireo firenena vitsy eto an-tany nitana ny fampirantiana teo afovoan'ny areti-mandringana Covid-19 sy noho izy iray amin'ireo firenena vitsy manerantany hisokatra ho an'ireo mpizahatany tonga iraisam-pirenena. Nanangana fitaovana fiarovana sy fizahan-tany momba ny fizahan-tany Covid-19 ihany koa izy mba hiantohana ny ratsy amin'ny fepetra fisorohana Covid-19 ataon'ny indostrian'ny fizahantany any Namibia.
Sambany, Andriamatoa Pololikashvili dia nitsidika tamim-pomba ofisialy 3 andro hanampiana amin'ny fanamafisana ny paikadin'i Namibia momba ny fifohazana fizahan-tany sy hanomezam-boninahitra ny ezaka eo an-toerana hatreto mba hamonjy asa fivelomana sy asa. Nitsidika tamim-panajana ny filoha lefitra Hon. Nangolo Mbumba ary nanamafy ny fampiantranoana ny 'Brand Africa Conference' any Namibia IN 2021. Nizara ezaka nomanina ihany koa izy hanohanana ireo hetsika fiarovana ny fizahantany amin'ny fampivelarana ny fizahantany ambanivohitra. Brand Africa dia hetsika iraisan-jaza mba hanomezana aingam-panahy an'i Afrika lehibe amin'ny alàlan'ny fampiroboroboana endrika tsara an'i Afrika, fankalazana ny fahasamihafana misy eo aminy sy ny fahaizany mampifaninana azy. Ny Sekretera jeneraly dia nanasongadina ny maha zava-dehibe ny fanaovana ny fizahantany eto Afrika mety ho hitan'izao tontolo izao kokoa hampirisihana ny mpizahatany hitsidika hamorona asa sy hiaro ny asa fivelomana.
Nandritra ny fotoana nijanonany dia nitsidika ny tranokalan'ny UNESCO World Heritage ao amin'ny tany efitra Sossusvlei antsoina hoe Ranib Sand Sand izy. Io irery no tany efitra amoron-tsiraka eto an-tany izay misy tanety dongon-kotroka maro voataona amin'ny zavona. Taorian'izay dia nanidina tany amin'ny iray amin'ireo mpizahatany lehibe any Namibia izy, Swakopmund izay nanombohany ny bokin'i Gastronomy Namibia, tetikasa iray izay iarahan'ny UNWTO miaraka amin'i Namibia hampiroborobo ny Gastronomy Afrikana amin'izao tontolo izao. Notsidihany ihany koa ny tranokala Ramsar Wetland tao amin'ny farihin'i Walvis Bay izay nanehoany ny fahalianany tamin'ny fandrosoan'i Namibia amin'ny biodiversité.
Gaga ny sekretera jeneraly noho ny endrika tsy manam-paharoa mampiavaka an'i Namibia sy ny kolontsaina samihafa. Nilaza izy fa toy ny mahita an'izao tontolo izao amin'ny firenena iray ny fahitanao ny faritra samihafa eto amin'izao tontolo izao any Namibia ary mahatonga an'i Namibia ho mendrika mpizahatany maro hitsidika azy io. Nilaza Andriamatoa Pololikashvili fa matoky izy fa vonona ny ho tonga mpizahatany iraisam-pirenena i Namibia satria milamina ny firenena amin'ny fiarovana manokana ny fizahan-tany sy ny fisorohana Covid-19.
Resy lahatra Andriamatoa Pololikashvili fa eo am-pelatanana ny indostrian'ny fizahantany any Namibian izay nahatonga azy io hatanjaka satria gaga tamin'ny hatsaran'ny indostria teo amin'ny sehatry ny fandaminana sy ny trano honenana. Afaka nilaza izy fa amin'ny alàlan'ny fandaminana tsara sy ny fari-pahaizana avo lenta momba ny lozisialy mandeha any Namibia.
Seath Heathrow: ny teti-pitanana asa dia tsy lasa lavitra ho an'ny sehatry ny seranam-piaramanidina
Mampifantoka ny fomba fitantanana-maivana amin'ny rivodoza COVID-19 ny trano fandraisam-bahiny manerantany